Fotaka sy lavadavaka ny mandravaka ny lalana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny lalam-pirenena faha-7, izay mampitohy an’Antananarivo sy Toliary no anisan’ny be mpampiasa indrindra eto Madagasikara. Efa ela dia ela anefa izy ity no tsy nisy fikojakojàna ka manomboka feno lavadavaka, raha ny eto Antsirabe manokana no jerena. Vao maika niharatsy izany taorian’ny rivo-doza Chedza, izay nitondra orana sy rivotra nahery tokoa. Zary miteraka fahaterena ireo fotaka sy lavaka ireo satria kely monja no azo hizorana ary io no ifampizaran’ny an-daniny sy ny an-kilany avy. Ny eto an-tanàna kosa, tsy ity lalam-pirenena ity irery no mihapotika fa na dia ny any anaty tanàna aza tokony hisy fanatsarana sy fanarenana. Hatramin’izao aloha, mbola tsy misy ny hetsika, fa ny fokontany sasantsasany no mba miara-mientana manao izay mba vitany. Ny tena simba be ohatra, ny manoloana ny jovena ka hatreo amin’ny fijanonan’ny taksibe eny vatofotsy. Koa, manao antso avo ny mponin’Antsirabe amin’izao fotoana izao, satria sady manaratsy endrika ny tanàna ny lalana feno kiloadoaka no mamotika fiara ihany koa. Misy koa ny mpitondra fiara no tsy manaja lalana; mirimorimo tsy mitandrina ka mandena rano-potaka ny mpandeha an-tongotra. Nambaran’ity mpamily fiara mpitatitra iray ity, fa ny kamiao lehibe no tena anton’izao fahasimban’ny lalana izao; toy ny etsy Ampiaviana, simban’ny kodiaran’ny kamiao mitankisatra mihitsy ny ilan’ny atsinanan’ny Galana.
Lasa tsy fanajana ny lalàna mifehy ny fitondrana fiarakodia sy ny takela-by famantarana ilay haratsian-dalana. Manararaotra mangalatra manao hitsin-dalana ny mpamily noho ireo lavaka, raha vao tsy misy pôlisy miambina; indrindra fa ny eo anilan’ny sekoly André Resampa. Miendaka ny godorao ka iandronan’ny rano, tsy fantatra na lalina na marivo. Efa betsaka ny fiara nijabaka, eny fa na dia ireo efa za-dalana aza, raha tsy mitandrina mety hivadika eo amin’io lalana io. Soa ihany fa mbola tsy nisy ny loza, kanefa ilàna fitandremana sy fanajana ny ara-dalàna voatondron’ny takela-by mitsatoka eran’ny sisin-dalana. Manampy trotraka koa manko ny fiavian’ny orana ka malama izy amin’izao fotoam-pahavaratra izao ; ny mpitandro ny filaminana rahateo mamonjy aloka raha vao milatsaka ny orana fa tsy mandamina ny fifamoivoizana. Anjaranao no manao izay hikajiana azy ity fa io no soa lehibe iombonana voalohany eto amin’ny firenena, ary lova ho lovain’ny taranaka amam-para rahatrizay. Raha tsy kolointsika manko io lalana io, dia mety ho tapi-dalan-kaleha isika ary tsy ho afaka mivezivezy mamangy Havana intsony ka hiharatsy manaraka izany ny fifandraisana.
Marihina fa olana iainan’ny tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara io olana mahakasika ny faharatsian’ny lalana vokatry ny tsy fahampian’ny fikojakojana azy. Milaza hatrany ny mpitantana ny kaominina fa tsy ampy ny vola hikojakojana ny lalana mainka moa fa hanao lalana vaovao izany dia zary nofy. Olana hita eny amin’ny lalam-pirenena ihany koa. Ny faritra mamokatra rehetra dia tratran’io fahasimban’ny lalana io ka mampiakatra ny saran’ny famoahana ny vidin’ny vokatra tonga eny amin’ny mpanjifa. Zary ireo mpijirika, mpitatitra sy ny mpanararaotra isan-karazany izany no mahazo tombony fa tsy ireo mpamboly mpamokatra velively. Mahalasa eritreritra sanatria ve dia ireo olonaireo no manimba ny lalana mba tsy hihena ny vola miditra amin’izy ireo ? Ho avy tsy ho ela ny fifidianana eny anivon’ny kaominina tsara henoina izay fampanantenana ho hataon’izay kandida hilatsaka ho ben’y tanàna. Tena tompon’andraikitra izy ireo amin’ny fanamboarana ny lalana tsy tahaka ny depiote mampanantena lalana kanefa lalàna ny azy ireo. Natao izao antso izao mba hanairana ny mpitondra amperinasa sy handrenesana ireo te hitondra rahampitso. Tantara mitohy izany ity resaka lalana ity.